Izehlakalo | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Kuzo zonke izehlakalo zikaPetru, wabekezelela amakhulu ezivivinyo. Nakuba abantu namuhla beliqonda igama elithi ‘uvivinyo,’ abayiqondi nhlobo incazelo yangempela yalo noma izimo. UNkulunkulu udambisa ukuzimisela komuntu, acwenge ukuzethemba kwakhe, aphelelise zonke izingxenye zakhe, kakhulu lokhu ukufeza phakathi nezivivinyo. Izivivinyo nazo ziwumsebenzi ocashile woMoya Ongcwele. Kubonakala sengathi uNkulunkulu umshiyile umuntu, ngakho umuntu uma engaqaphile uzozibona njengezivivinyo zikaSathane. Empeleni, izivivinyo eziningi zingabhekwa njengezilingo, futhi lona umyalo nomthetho womsebenzi kaNkulunkulu. Uma umuntu ngempela ephila phambi kukaNkulunkulu, uyozibona njengezivivinyo zikaNkulunkulu angaziyeki zidlule. Uma othile ethi ngoba uNkulunkulu enaye uSathane nakanjani ngeke asondele kuye, lokho akulona iqiniso ngokugcwele. Kungachazwa kanjani ukuthi uJesu wabhekana nezilingo ngemva kokuba ezile ukudla ehlane izinsuku ezingu-40? Ngakho uma ngempela umuntu eqondisa imibono yakhe ekukholelweni kuNkulunkulu, uyobona izinto eziningi ngokucace kakhulu futhi ngeke aphanjwe ukuqonda okungamanga. Uma umuntu enqume ngempela ukupheleliswa uNkulunkulu, udinga ukubuka izindaba abhekene nazo ngezindlela eziningi, anganciki kwesobunxele nakwesokudla. Uma ungenalo ulwazi lomsebenzi kaNkulunkulu, ngeke ukwazi ukubambisana noNkulunkulu. Uma ungayazi imiyalo yomsebenzi kaNkulunkulu futhi ungayazi indlela uSathane asebenza ngayo kumuntu, ngeke ube nandlela yokwenza. Intshiseko nje engatheni ngeke ikwenze uzuze imiphumela yezidingo zikaNkulunkulu. Leyo ndlela yokwenza iyafana nekaLawrence, ayihlukile futhi igxila kuphela esehlakalweni, ayinakile ngokugcwele ukuthi uyini umsebenzi kaSathane, ukuthi uyini umsebenzi woMoya Ongcwele, ukuthi umuntu unjani ngaphandle kokuba khona kukaNkulunkulu, hlobo luni lwabantu uNkulunkulu afuna ukubaphelelisa. Indlela yokuziphatha kubantu abahlukile, indlela yokubamba intando kaNkulunkulu yamanje indlela yokwazi isimo sikaNkulunkulu, kubaphi abantu, kuziphi izimo, nakuyiphi inkathi, umusa kaNkulunkulu, ubukhulu Bakhe nokulunga kuyaqondiswa—akakuhlukanisi lokhu. Uma umuntu engenayo imibono eminingi njengesisekelo sakhe, isisekelo sezehlakalo zakhe, khona-ke ukuphila akubuzwa, ngokunjalo nangezehlakalo zakhe; uma uzithoba ngobuwula kukho konke, ubekezelela konke. Bonke labo bantu kunzima ukuthi bapheleliswe. Kungashiwo ukuthi ukungabi nambono kokuthintwe ngenhla kuwubufakazi obuqandi-khanda bokuthi uyisiphukuphuku, ufana nensika kasawoti, uhlale ume kwa-Israyeli. Abantu abanjalo abanamsebenzi, bayizinto ezingelusizo lwalutho! Abanye abantu bahlale bezithoba bengaboni, bahlale bezazi bona futhi bahlale besebenzisa izindlela zabo zokuziphatha kwabo lapho besingatha izindaba ezintsha, noma besebenzisa “ukuhlakanipha” ukuze basingathe izindaba ezingabalulekile okungadingeki nokukhuluma ngazo, labo ngabantu abangenakho ukuqonda, njengokungathi ngokwemvelo babezoziphonsa osizini, bahlale befana, bangashintshi; lesi isiphukuphuku esingenakho ngisho nokuqonda. Abalokothi balinganise izikali ezimweni noma kubantu abahlukile. Abantu abanjalo abanazo izehlakalo. Ngiyabona ukuthi abanye abantu bazazi bona kuze kufike ezingeni elithile kangangokuthi lapho behlangana nalabo abanomsebenzi womoya okhohlakele baze bakhothamise amakhanda abo bavume icala, abalokothi basukume babalahle. Lapho bebhekene nomsebenzi osobala woMoya Ongcwele, abalokothi balalele, nokukholelwa kuleyo mimoya emibi nakho kusezandleni zikaNkulunkulu, futhi abalokothi nakancane baphakamele ekuphikiseni. Laba abantu abangenaso isithunzi sikaNkulunkulu, futhi nakanjani abakwazi ukuthwala imithwalo esindayo kaNkulunkulu. Labo bantu abadidekile abahlukanisi. Kodwa le ndlela yolwazi kufanele ishiywe njengoba ingafinyeleleki emehlweni kaNkulunkulu.
Ngempela uNkulunkulu wenza umsebenzi omningi kubantu, ngezinye izikhathi uyabazama, ngezinye uzama izindlela zokubavuselela, ngesinye isikhathi akhulume amazwi abaqondisayo athethelele neziphambeko zabo. Ngezinye izikhathi uMoya Ongcwele uholela abantu endaweni elungiswe uNkulunkulu ukuze bathole izinto eziningi abangenazo benganakile. Ngalokho abantu abakushoyo nabakwenzayo, indlela abantu abaphatha ngayo abanye nabasingatha ngayo izinto, bengazi, uMoya Ongcwele uyabakhanyisela ukuze baqonde izinto eziningi ezazingaziwa phambilini, ubavumele baqonde izinto eziningi noma abantu kanzulu, ubavumele babukisise izinto eziningi ababengazinakile ekuqaleni. Uma uxhumana nezwe, kancane kancane uba nokucwasa ngezinto zezwe, futhi njengoba usondela ekufeni ungase uphethe ngokuthi: “Kunzima ngempela ukuba umuntu.” Uma ubona esikhathini esithile phambi kukaNkulunkulu, bese uqonda umsebenzi kaNkulunkulu nesimo Sakhe, nakanjani uyozuza ukuqonda okukhulu, futhi isiqu sakho siyokhula kancane kancane. Into eziningi zomoya uyoziqonda kangcono, futhi umsebenzi kaNkulunkulu uyokucacela kakhudlwana. Uyokwazi ukwamukela amazwi kaNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu, zonke izenzo zikaNkulunkulu, isimo sikaNkulunkulu, nalokho uNkulunkulu ayikho nanakho kube ukuphila kwakho. Uma okuwukuphela kwento oyenzayo kuwukuzulazula emhlabeni, izimpiko zakho ziyoqina nakakhulu, futhi ingxenye yakho ephika uNkulunkulu iyoba nkulu unomphela. Kuyoba nzima ngoNkulunkulu ukuthola indlela angakusebenzisa ngayo. Ngenxa yokuthi yandile inkulumo ethi “njengoba ngibona” kuwe, kunzima ngoNkulunkulu ukuthola indlela angakusebenzisa ngayo. Lapho uqhubeka uphambi kukaNkulunkulu, ziningi izehlakalo oyoba nazo. Uma usesezweni njengesilwane sasendle, umlomo wakho uvuma ukukholelwa kuNkulunkulu ekubeni inhliziyo yakho ikwenye indawo, futhi ifilosofi lezwe lokuphila, ngeke yini lokhu kube ukudlibhiza wonke umsebenzi wasekuqaleni? Ngakho, lapho abantu belokhu bephambi kukaNkulunkulu kuba lula ukuthi bapheleliswe uNkulunkulu. Lena indlela uMoya Ongcwele owenza ngayo umsebenzi Wakhe. Uma ungakuqondi lokhu, kuyoba nzima ngawe ukungena emgudwini ofanele, ingasaphathwa eyokupheleliswa uNkulunkulu. Ngeke ukwazi ukuba nokuphila okujwayelekile komoya, kuyoba sengathi ukhubazekile, unomsebenzi onzima kuphela ungekho umsebenzi kaNkulunkulu. Ngeke yini lokhu kube into engalungile esehlakalweni sakho? Akudingeki empeleni ukuthi ukhuleke ukuze ube phambi kukaNkulunkulu. Ngezinye izikhathi ukucabangisisa kwakho ngoNkulunkulu noma ukujula ngomsebenzi Wakhe, kokunye ekusebenzelaneni kwakho nodaba oluthile, kokunye ngokwembulwa esehlakalweni, oza ngakho phambi kukaNkulunkulu. Abantu abaningi bathi, angikho yini phambi kukaNkulunkulu, njengoba ngijwayele ukuthandaza? Abantu abaningi bathandaza bangaqedi “phambi kukaNkulunkulu.” Imithandazo ingase ihlale isezindebeni zabo, kodwa abahlali ngempela phambi kukaNkulunkulu. Lolu hlobo lomuntu lungalonda kuphela isimo salo sokuba phambi kukaNkulunkulu ngale ndlela. Abakwazi ukuxhumana noNkulunkulu njalo ngezinhliziyo zabo, noma ukusebenzisa indlela yezehlakalo ukuze beze phambi kukaNkulunkulu, kungaba ngokucabangisisa, ukucabanga buthule ezinhliziyweni zabo, noma ukuxhumana noNkulunkulu wezinhliziyo zabo ngezabo izinhliziyo ngokucabanga ngomthwalo kaNkulunkulu. Bathandaza esibhakabhakeni ngemilomo yabo. Abantu abaningi abanaye uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, banoNkulunkulu kuphela lapho besondela kuNkulunkulu, kodwa ezikhathini eziningi abanaye nhlobo uNkulunkulu. Ingabe lawa akuwona amazwi okuba noNkulunkulu enhliziyweni? Uma benaye ngempela uNkulunkulu, ingabe bekungenzeka ngempela benze izinto ezenziwa abaphangi noma izilwane? Uma umuntu emhlonipha ngempela uNkulunkulu, uyoletha inhliziyo yakhe yeqiniso ixhumane noNkulunkulu, nemicabango yakhe kanye nemibono iyohlale inamazwi kaNkulunkulu. Ayoba mancane amathuba okuba benze amaphutha ezintweni zangaphandle abantu abakwazi ukuzifinyelela, bengenzi lutho oluphikisana ngokusobala noNkulunkulu. Yilokhu kuphela okuyizinga lokuba yikholwa langempela.
Okwedlule：Lokho Umalusi Ofanelekayo Okufanele Ahlome Ngakho